» आफु मरेर प्रेमिकालाई बचाउने ज्याक र टाइटानिक जहाजको रहस्य यस्तो छ
आफु मरेर प्रेमिकालाई बचाउने ज्याक र टाइटानिक जहाजको रहस्य यस्तो छ
२०७४, २ फाल्गुन बुधबार १४:५३
Kate winslet & leonardo dicaprio In Titanic Movie.
मकवानपुर, २ जेठ । ‘टाइटानिक जहाज’ तथा ‘ज्याक र रोज’ को प्रेमकथाको बारेमा नसुन्ने सायदै कमै होलान् । हलिउड चलचित्र टाइटानिक सुपरहिट चलचित्र हो । प्रेमकथा बोकेको यो चलचित्र अहिलेसम्मै पनि चर्चित छ । यस चलचित्र हेरिसकेपछि भने वास्तविक टाइटानिक जहाजका बारेमा सबैलाई जान्ने ईच्छा हुनसक्छ ।
यहाँ प्रेमदिवसको अवसर पारेर टाइटानिक जहाजको वास्तविकता बारेमा विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा यो सामाग्री तयार गरिएको छ ।
चर्चित टाइटानिक जहाज ईतिहासको पहिलो जहाज हो जुन हिउँको चट्टान (आईसबर्ग) मा ठोक्किएर दुर्घटना भयो र समुद्रमा डुब्यो । सन् १९१२ को अप्रिल १० मा टाइटानिक जहाजले पहिलो यात्रा शुरु गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि सन् १९१२ को १४ अप्रिलमा हिउँको चट्टानमा ठोकिएर जहाज डुबेको हो । जहाजमा २ हजार २ सय ८ मानिस सवार थिए जसमध्ये जम्मा ७ सय १२ जना मात्र बाँच्न सफल भए ।
जहाजमा यात्रीहरूलाई बस्नका लागि तीनवटा श्रेणी बनाइएको थियो । टाइटानिक जहाज जुन आइसबर्गसँग ठोकिएर डुबेको थियो, त्यो आइसबर्ग एक हजार वर्षदेखि समुद्रमा तैरिरहेको थियो । टाइटानिक जहाजका कप्तानले आइसबर्गलाई ३० सेकेन्डअघि मात्र देखेका भए यो दुर्घटना हुनबाट रोक्न सकिने थियो भन्ने तथ्य समेत खुलेको थियो ।
RMS Titanic departing Southampton on April 10, 1912 . Pic : Wikipadea
टाइटानिक फिल्मको एउटा मार्मिक दृश्य तपाईंलाई याद होला । त्यसमा जहाज डुब्दै गर्दा सांगीतिक समूहका सदस्यहरूले शान्ति कायम राख्नका लागि संगीत बजाइरहेका थिए । फिल्मको यो दृश्यले दर्शकको रौं ठाडो बनाएको थियो । वास्तवमा जहाज डुब्दै गर्दा सांगीतिक समूहका मानिसले यात्रीको डर हटाउनका लागि घन्टौंसम्म संगीत बजाएका थिए ।
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि एक जापानी यात्री बचेर आफ्नो देश सुरक्षित रूपमा पुगेका थिए । तर जहाजसँगै आफू पनि डुबेको भए हुन्थ्यो भनेर उनलाई ग्लानि भइरह्यो । टाइटानिक जहाजमा चारवटा चिम्नी थियो तर तीनवटाले मात्र काम गथ्र्यो । चौथो चाहिँ देखाउनका लागि मात्र बनाइएको थियो ।
टाइटानिक जहाज डुब्नुभन्दा एक दिनअघि मोक ड्रिल अर्थात सुरक्षा अभ्यास गराउने योजना बनाइएको थियो । त्यसमा यात्रीहरूलाई संकटकालीन स्थितिमा के गर्नुपर्छ भनी सिकाइने थियो । तर योजना स्थगित गरियो । आइसबर्गमा ठोक्किएको दुई घन्टा ४० मिनेटमा टाइटानिक जहाज पूरै डुब्यो । टाइटानिक जहाज डुब्दै गर्दा क्यालिफोर्निया नामक जहाज नजिकै थियो तर दुई जहाजबीचको सम्पर्क टुटेपछि क्यालिफोर्निया जहाजका मानिसले कुनै सहायता गर्न सकेनन् । टाइटानिक जहाज डुब्दै गर्दा यात्रीहरूलाई बचाउनका लागि जीवनरक्षक डुंगाहरूको उपयोग गरिएको थियो । तर तिनलाई पूरा भरिएको थिएन । क्षमताअनुसार डुंगा भरिएको भए थप केही यात्रीको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो ।
टाइटानिक फिल्मको बजेट मूल टाइटानिक जहाजको मूल्यभन्दा धेरै बढीको थियो । टाइटानिक दुर्घटनामा बच्ने एक यात्री मिल्भिना डीन थिइन् । उनको मृत्यु सन् २००९ को मे ३१ मा भयो । त्यतिखेर उनी ९७ वर्षकी थिइन् ।
Kate winslet & leonardo dicaprio In Titanic Movie. Pic : Google
टाइटानिक चलचित्रमा टाइटानिक जहाजका यी नै वास्तविक तथ्यहरु र भएका घटना क्रमहरु समावेश गरेर कथा बुनिएको थियो । कतिपयले ज्याक र रोज जस्तै कुनै प्रेमी जहाजमा भएको अनुमान समेत गरेका थिए । प्रेम र जीवनमा अनि चर्चित इतिहासका कथा भएका काराण यो चलचित्र सुपरहिट भयो । जसको चर्चा आज पनि हामी माझ छ ।
चलचित्र ‘सायाबुङ’ को काठमाण्डौमा विशेष प्रदर्शन हुने
कुमारीत्वको प्रमाणपत्र पाएपछि मात्र बिहे, लोग्नेको जबरजस्ती चुपचाप सहन बाध्य
पढ्ने र तास खेल्नेलाई यस्तो हुन्छ फाईदा
कांग्रेसमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र दुवै सहमहामन्त्री निर्वाचनबाट
मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिकामा बेवारिसे अवस्थामा शव फेला